Sida fudud ee shaashadda kombiyuutarka loogu rogo | Forum Mobile
Sida fudud ee shaashadda kombiyuutarka loogu rogo
Daniel Terrasa | 02/11/2021 15:00 | La cusbooneysiiyay 02/11/2021 17:57 | Nidaamyada hawlgalka
Marka la isticmaalayo kombuyuutarradayada, waxa ugu badan waa in had iyo jeer loo isticmaalo shaashadaha si siman. Si kastaba ha noqotee, nidaamyada hawlgalka ee ugu muhiimsan waxay bixiyaan xulashooyin kale oo lagu daawado oo lagu dhejiyo shaashadda jihooyin kala duwan: si toos ah, oo leh wareeg 180 darajo si loo rogo, iwm. Sidee loo rogaa shaashadda kombiyuutarka? Waxaan hoos ku aragnaa.
Isticmaalayaal badan ayaa la yaabi doona waxa shaqadani u tahay. Ka dib oo dhan, dhammaan shabakadaha internetka iyo barnaamijyada isdhexgalka waxaa loogu talagalay in loo eego qaab caadi ah. Xaqiiqdu waxay tahay in arrintu sidaas tahay, inkasta oo ay jiraan waqtiyo gaar ah marka la awoodo in la beddelo shaashadda kumbuyuutarka ayaa faa'iido leh.
1 Marka ay faa'iido leedahay in la beddelo shaashadda
2 Ku rog shaashadda daaqadaha
2.1 Gawaarida furayaasha
2.2 Liiska qaabeynta
2.3 Iyadoo loo marayo CMD
2.4 Codsiga dibadda: iRotate
3 Ku wareeji shaashadda Mac
Marka ay faa'iido leedahay in la beddelo shaashadda
Kiisaska ay ku habboon tahay in la isticmaalo shaqadan aad bay u kala duwan yihiin, in ka badan ayaa laga yaabaa in qofku u malaynayo jaleecada hore, inkasta oo inta badan kiisaska ay sabab u yihiin labadan sababood:
Si loo soo celiyo muuqaalkii caadiga ahaa ee shaashadda. Haa, mararka qaarkood si lama filaan ah ayaanu wax u taabanaa (innagoo aan si sax ah u garanaynin waxa) oo aanu aragno shaashadda oo wareeg ah iyo jiirka oo aan ilaalin. Waxa ugu badan ayaa ah in aad timaadid ka dib markii si badheedh ah loo isticmaalo furaha furaha ee kiiboodhka. Si aan wax ugu soo celino halkoodii, waa in aan ogaanaa sida loo rogo shaashadda kombiyuutarka iyo sida loo tirtiro ficilka.
Si aad u akhrido ama u aragto mareegaha ama dukumentiyada qaarkood. Haddii qalabkeenu leeyahay kormeere ama shaashad aanu ku wareejin karno gacanta, waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan inaan ka dhigno jihaynta waxa shaashadda ka muuqda. Tusaale ahaan, waxay si gaar ah ugu habboon tahay markaad akhrinayso maqaallada ama barnaamijyada.
Iyadoo aan loo eegin sababta, waxaan hoos ku falanqeyneynaa dhammaan siyaabaha jira si loo beddelo ama loo rogo shaashadda kumbuyuutarkayaga:
Ku rog shaashadda daaqadaha
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo rogo shaashadda gudaha Windows. Hababkan kala duwani waxay ku ansaxayaan noocyadii ugu dambeeyay ee nidaamkan qalliinka. Iyo dabcan sidoo kale Windows 11. Aynu mid mid u eegno iyaga:
Sida loo rogo shaashadda kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka
Isku-dhafka muhiimka ah, oo si fiican loo yaqaan furayaasha keyboard-ka, waa hab aad u fudud oo wax ku ool ah oo Windows na siinaya inaan fulino dhammaan noocyada falalka. Iyaga waxaad ku samayn kartaa wax walba: barnaamijyada iyo faylasha furan, samee hawlo fudud, iyo sidoo kale dabaqa goobaha.
Marka ay timaado ka jawaabista su'aasha ah sida loo rogo shaashadda kombiyuutarka, furayaashan gaaban ee kumbuyuutarrada ayaa ah kuwan soo socda.
Ctrl + Alt + fallaadho hoos: 180 digrii ayaanu u roganaa, yacni, wuu rogrogaa.
Ctrl + Alt + falaarta bidix: waxaanu samaynaa shaashada 90 digrii (oo u socota saacad ka soo horjeeda).
Ctrl + Alt + falaarta midig: waxaanu samaynaa shaashada wareega 270 digrii.
Fallaarta Ctrl + Alt +: kooxdan amarrada ah waxaan ku soo celin karnaa shaashadda jihadeeda caadiga ah.
Kiiboodhkan gaaban Waxay ku shaqeeyaan ku dhawaad ​​dhammaan laptopsyada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaysan noogu adeegin kumbuyuutarka desktop-ka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hab lagu isticmaalo iyaga oo awood u siinaya furayaasha furaha ee app-ka. Xarunta Taliska Garaafyada Intel. Tan waxa lagu soo dejisan karaa oo lagu rakibi karaa nidaamkayaga dukaanka Microsoft gabi ahaanba bilaash.
Ku wareeji shaashadda gudaha Windows adigoo isticmaalaya menu-ka dejinta.
Hab kale oo fudud oo loo rogo ama loo rogo shaashadda kumbuyuutarkayaga ayaa laga helayaa gudaha Menu Settings Windows, kaas oo dariiqa naga caawiya inaan habaynno dhammaan dhinacyada nidaamka hawlgalka. Tani waa sida ay tahay inaan sameyno:
Marka hore waa in aan tagno qaybta "Dejinta"
Halkaa waxaan marka hore dooranaa ikhtiyaarka "Nidaam" iyo wixii ka dambeeyay "Shaashad". Waxay noqon doontaa meesha aan ka helno fursadaha lagu beddelo jihada shaashadda kumbuyuutarkayaga. Waxaan dooran karnaa hababka soo socda:
Horizontal (la rogay).
Toosan (la rogay).
Iyadoo loo marayo CMD
Sida fudud ee shaashadda kumbuyuutarka loogu rogo adigoo isticmaalaya CMD
Dabcan, waxaad sidoo kale samayn kartaa ficilka wareejinta shaashadda kombiyuutarka iyada oo loo marayo CMD console o Astaanta Nidaamka. Si taas loo gaaro waxaan u baahannahay inaan haysano aaladda Muujinta, kaas oo lagu soo dejisan karo bilaash iyada oo loo marayo isku xirka soo socda: Display.
Ka dib markii la soo dejiyo oo rakibo barnaamijka, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad furto daaqada CMD gudaha Windows oo aad fuliso amarka soo socda:
display64 / wareeg: XX
"XX" waa in lagu bedelaa tirada darajo ee aan rabno inaan ku wareejinno shaashadda, taas oo ah, 90, 180 ama 270 darajo.
Codsiga dibadda: iRotate
Shaashada kombayutarka waxaa lagu wareejin karaa iyadoo la isticmaalayo qaar ka mid ah codsiyada dibadda sida iRotate
Si la mid ah, waxaad isticmaali kartaa codsiyada dibadda qaarkood, oo gebi ahaanba bilaash ah, si aad awood ugu yeelatid inaad u beddesho shaashadda kombiyuutarkaaga habka ugu habboon. Haddii ay timaado in mid la taliyo, ka la doortay waa wareejin, qalab bilaash ah oo aan ku wareejin karno shaashadda kombiyuutarka 90, 180 ama 270 darajo. Dhammaan si aad u fudud iyo ka menu macnaha guud ee Windows.
Soo dejiso Xiriirka: wareejin
Ku wareeji shaashadda Mac
Sida loo rogo shaashadda Mac
Haddii aad isticmaasho Mac halkii aad ka isticmaali lahayd Windows oo aad la yaabban tahay sida loo rogo shaashadda kombiyuutarka, sidoo kale waxaan haynaa jawaabta. Kaliya waa inaad raacdaa tillaabooyinka soo socda:
Marka hore waxaan furaynaa "Doorashada nidaamka".
Kadibna furayaasha ayaa isku mar la riixayaa "Command" iyo "Option" (furaha calaamadda tufaaxa, kaas oo kumbiyuutarrada da'da weyn lagu calaamadeeyay sida Alt), ka dibna riix "Screens" icon.
Marka tan la sameeyo, waxaa nala tusi doonaa menu cusub oo la yiraahdo "Wareeg". Halkaas waxaan ku yeelan doonnaa suurtagalnimada in aan ku wareegno shaashadda 90, 180 ama 270 digrii.
Ugu dambeyntii, si loo fuliyo isbeddelka hanuuninta, waa inaad xaqiijisaa adigoo gujinaya badhanka. "In la aqbalo".
Waa in maskaxda lagu hayaa in leexashadu had iyo jeer dhacdo saacada ka soo horjeeda (Ka soo horjeeda Jihada Saacadda ama ACD). Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado marka la wareejinayo shaashadda, cursorka jiirka ayaa raaci doona hanuuninta cusub. Markaa waxa suurtogal ah in marka hore ay nagu yara adkaato in aanu la qabsano dhaqdhaqaaqooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Sida fudud ee shaashadda kombiyuutarka loogu rogo
Bots-ka Telegram-ka ugu fiican oo aanad weli garanayn
Sida looga faa'iidaysto bixinta HBO Max macaamiil hore ahaan